प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध देउवाको गर्जन : विकास गर्ने समय किन खेर फालेको ? (भिडियोसहित) – Himshikharnews.com
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध देउवाको गर्जन : विकास गर्ने समय किन खेर फालेको ? (भिडियोसहित)
१६ बैशाख २०७६, सोमबार १९:४३
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विकास गर्ने समय भएपनि समय खेर फालेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको चौथो अधिवेशनको सुरुवातमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले वर्तमान सरकारले निर्माला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन पनि सरकारले नसकेको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे,‘हत्यारा किन जोगाइयो। सरकारप्रति आशंका छ। सरकारको उपलब्धि निराशाजनक छ। विगतका सरकारले गरेको आयोजनाहरु उद्घाटन गरेर आफुले गरेको भन्दै प्रचार बाहेक केही गरेको छैन।’
सरकारले बुढीगण्डकी परियोजनालाई टेन्डरी नगरी धेरै रकम खेर फालेको अर्को गम्भिर आरोप लगाए । त्यस्तै, विदेशी सहयोगको डिङ हाँक्ने सरकारले विदेशी सहयोग लगानी थोरै ल्याएको उनको आरोप छ । मुलुकको बैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दै गएको पनि उनले आरोप लगाए ।
वाइडबडीमा अख्तियारले छानविन गरी निकर्षमा पुगोस भन्ने देउवाको भनाई छ । बालुवाटारको जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेको हो कि कसले यसमा छानविन होस भन्ने देउवाको अर्को माग छ । उनले भने,‘सरकारले ढाकछोप गरेको देख्दा सरकार यस्तो दुष्कर्ममा नलागोस्।’ source: www.reportersnepal.com/